Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii kooxda Arsenal ay xalay guuldarrada kala kulantay Crystal Palace – Gool FM
(London) 22 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay naadiga Crystal Palace oo ku soo booqatay garoonkeeda kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Emirates ayaa looga adkaaday Arsenal 2-3, waxaana Gunners labada gool waxaa u dhaliyey kulankan Ozil 47’daqiiqo iyo Aubameyang 77’daqiiqo, halka Crystal Palace ay saddexda gool oo ay guusha ku qaadatay kulankan ay u kala dhaliyeen Benteke 17’daqiiqo, Zaha 61’daqiiq iyo McArthur 69’daqiiqo.
Haddaba halkaan hoose ku eegeynaa rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Crystal Palace ayaa ka fogaatay guuldarro ka soo gaarta labada lugood oo horyaalka ay la ciyaarto Arsenal hal xilli ciyaareed gudihii markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 1979-80.
>- Arsenal ayaa waxa ay la dhibtoonaysaa haatan guuldarradii ugu horreysay ee ciyaaraha horyaalka ku soo gaarta gurigeeda kulammada London Derby tan iyo bishii Janaayo sanadkii 2016-kii, markaasoo ay guuldarro 1-0 kala kulmeen Chelsea, waxaana ay guuldarro la’aan kulamada London Derby ciyaaraha horyaalka ku ahaayeen garoonkooda Gunners, 13 kulan waxa ay guul gaareen 10 kulan halka ay barbaro galeen 3 kulan oo kale.
>- Guushii Crystal Palace ayaa Roy Hodgson ka dhigtay macallinkii todobaad ee kala duwan ee guul ku soo gaara horyaalka Premier League kulammo uu booqday labadaba garoomada Highbury iyo Emirates, sidaasoo kale waxaa horay u sameeyey tababareyaasha kala ah; Alan Curbishley, Sir Alex Ferguson, Gérard Houllier, Harry Redknapp, José Mourinho iyo Kenny Dalglish.
>- Crystal Palace ayaa dhaliyey 29 gool kulamada ay martida yihiin ciyaaraha Premier League xilli ciyaareedkan, waana kal ciyaareedkoodii ugu fiicnaa tartankan oo ay bannaanka goolal intaa la eg ku soo dhaliyaan sidaan oo kalena waxa ay horay u sameeyeen oo dibadda ku soo dhaliyeen 29 gool kulamada horyaalka xilli ciyaareedkii 1991-92.
>- Weeraryahanka kooxda Crystal Palace ee Christian Benteke ayaa saftay kulankiisii 200-aad ee horyaalka Premier League kulankan ay ka horjeedeen Arsenal, waxaana uu dhaliyey 46 gool 100-kiisii kulan ee ugu horreeyey tartankan, laakiin hadda waxa uu shabaqa gaarsiiyey kaliya 24 gool 100-kiisa kulan ee ugu dambeeyey horyaalka.
>- Christian Benteke ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee Crystal Palace tan iyo bishii April sanadkii 2018 markaasoo uu ka dhaliyey kooxda Leicester City, waxaana uu soo gabagabeeyey 19 kulan oo uusan wax gool ah dhalin, 25 shuut oo uu sameeyey iyo 358 maalmood oo uusan shabaqa soo taaban.
>- Wilfried Zaha ayaa kooxda Crystal Palace u dhaliyey siddeed gool kulamada martida (away) horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya Harry Kane 11 gool dhaliyey kulamada bannaanka iyo Jamie Vardy 10 gool dhaliyey ayaa kaga badan tartankan.
>- Mesut Özil ayaa gacan ka geystay 52 gool horyaalka Premier League isagoo ciyaaraya garoonka kooxdiisa Arsenal ee Emirates waxa uu garoonka ku dhaliyey 20 gool isagoo ku caawiyey 32 gool oo kale waana ciyaaryahanka ugu badan Arsenal ee sidaa sameeyey tan iyo markii uu kulankiisii ugu horreeyey u ciyaaray kooxda.
Afar waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester United guuldarrada weyn ka soo qaadatay kooxda Everton